निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले राष्ट्रबैंकबाट कति कमाए ? बाहिरियो यस्तो तथ्य ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले राष्ट्रबैंकबाट कति कमाए ? बाहिरियो यस्तो तथ्य !
निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले राष्ट्रबैंकबाट कति कमाए ? बाहिरियो यस्तो तथ्य !
काठमाडौं । पदीय दुरुपयोग गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्रबैंकको कर्मचारी हुँदा करिब १० करोड बराबरको सम्पत्ति कमाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती र छोराहरुसंँग गरी करिब १० करोड बराबरको सम्पती रहेको तथ्य फेला परेको हो । उक्त सम्पत्ति २०७२ चैतमा श्रेष्ठले बुझाएको सम्पत्ति विवरण फारमा उल्लेख भएअनुसारको हो । विवरणका अनुसार श्रेष्ठसंग १४.०२ आना जग्गा रहको छ ।
टोखामा रहेको उक्त जग्गाको प्रति आना २० लाख मात्रका दरले हिसाब गर्दा पनि हाल करिब रु.२ करोड ८० लाख ४० हजार पर्छ ।सो मध्ये ६ आनामा उनको घर पनि रहेको छ । श्रेष्ठले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनिसँग ६० तोला सुन र ६ सय तोला चाँदी छ ।
आज (बुधबार)को सुनको मुल्य प्रति तोला रु. ७० हजार २ सयले हिसाब गर्दा श्रेष्ठसँग रु. ४२ लाख १२ हजार बराबरको सुन रहेको छ । आजकै मुल्य प्रतितोला रु. ८ सय ४५ अनुसार उनिसँग रु. ५० लाख ७ हजार बराबरको चाँदी रहेको छ ।
श्रेष्ठले शेयरमा पनि लगानी गरेका छन । श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती र दुई छोराहरुको नाममा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रु. ५५ लाख ९१ हजार ४ सय बराबरको ५५ हजार ९ सय १४ कित्ता शेयर छ ।
त्यस्तै नागरिक बचतपत्रमा रु. ३५ लाख बराबरको १० कित्ता शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । श्रेष्ठले सवारी साधनको रुपमा हिरो होण्डा मोटर बाईक मात्रै रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन । जसको खरिद मुल्य रु ८५ हजार रहेको छ ।
त्यस्तै डेक्सटप, सोनी साधारण टेलिभिजन, सोनी लिड टेलिभिजन, सोनी मुभि क्यामेरा र सोनी डिजिटल क्यामेरा गरि १ लाख ४० हजारको उनकोे सम्पत्ति रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनिसँग करिब ९ करोड ६८ लाख ९८ हजार बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने श्रेष्ठले ऋण दिएका वा लिएका भने छैनन ।
२०७६ कात्तिक २२ गते प्रकाशित
२०७६ कार्तिक २२ गते १६:१५ मा प्रकाशित
'काठमाडौं घोषणा-पत्र' जारी गर्दै सकियो पोषण विस्तार विश्व सम्मेलन, के छ घोषणा-पत्रमा ?
पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको थप नतिजा प्रकाशन
५ कम्पनीको १ करोड ७० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
सडक दुर्घटनामा प्रहरी हबल्दारको मृत्यु
बैंकको सेयर छ ? पाउँदै हुनुहुन्छ २२ प्रतिशत बोनस !
मनिषाले बलिउडकर्मीसँग ओलीलाई भेटाउँदै